Moto kuramba bvunzo - Yuyao Jera Line Inokodzera Co., Ltd.
Kuedzwa kwemoto bvunzo kumwe kunodaidzwa kuti murazvo kunonoka bvunzo kunoshandiswa kuve nechokwadi chekuchengetedza moto kwezvigadzirwa kana zvigadzirwa uye kuyera avo moto mhinduro mhinduro. Izvo zvakakosha kuti isu tiite bvunzo iyi kuti tiongorore kuramba moto, kunyanya zvigadzirwa izvo zvinofanirwa kuiswa munzvimbo dzakanyanyisa.
-Fiber optic inodonha tambo
-Insulation kuboora chinongedzo (IPC)
Moto yekudzivirira bvunzo inoitwa neyakagadzika choto zvinoenderana neIEC 60332-1, IEC 60332-3 standard. Midziyo yekuyedza yakagadziridzwa otomatiki, iyo inogona kudzivirira kukanganisa kwevanhu kuti ive nechokwadi chechokwadi uye kunyatso kuyedza.
Isu tinoshandisa kutevedzera zviyero bvunzo pane zvigadzirwa zvitsva usati watanga, zvakare neyemazuva ese kudzora mhando, kuitira kuti uve nechokwadi chedu mutengi anogona kugamuchira zvigadzirwa zvinosangana nemhando yepamusoro zvinodiwa.